चन्द्र, औंशी र पूर्णीमा
Posted by Nirajan Thapa February 05, 2014
समाजसेवी चन्द्र केसी बाँया,
हास्यकलाकार जितु नेपालसँगै तस्वीर ः उहाँकै फेसबुक
एक समय यस्तो थियो जतिखेर म उनलाई सर्वाधिक घृणा गर्ने गर्थेँ, र एउटा त्यस्तो युग पनि थियो जतिखेर म उनी जस्तै सफल मान्छे बन्ने सपना बुन्थेँ । सपनामा सही उनको जस्तै सामाजिक र आर्थिक वैभवता ममा सवार भएको पाउथेँ, म त्यसै त्यसै पुलकित हुन्थेँ । र, अहिले फेरि समयले मलाई उनको र मेरो सम्बन्धको त्यो ऐतिहासिक मोडमा ल्याएर उभ्भाईदिएको छ कि यसले मलाई प्रेरित गरेछ मैले बुझेको चन्द्रकुमार के.सी. लाई दुनियाँ माझ छरप्रष्टै पारिदिन खोज्दैछु । हुनसक्छ, एक मान्छे भएका नाताले अर्को मान्छेका भएका दुर्बलताका बारेमा औला ठड्याउँदै गर्दा म बढि छुच्चो भान हुँला, अनि उनका उज्याला पाटाका बारेमा लेख्तै गर्दा उनको देवत्वकरण गरेको जस्तो पनि भान होला – मेरा प्रिय पाठकहरुलाई ! यदि त्यस्तो रह्यो भने मलाई क्षमा गर्नुहोला । मेरो प्रयास यहाँ न उनको चरित्र हत्या गर्नु हो, न त उनको देवत्वकरण ! सिर्फ मेरो कोशिस हो कि सन्तुलित ढंगले उनलाई कति बुझेको छु त्यो प्रष्टयाउने !
चन्द्रकुमार के.सी. यो नाम जब मेरो दिमागमा आउँछ – मेरो दिमागमा दुईवटा ब्यक्तित्व झर्लक्क भएर आउँछ । एउटा त्यो ब्यक्ति जो कठोर र निरन्तर लगावका बाबजुद छोटो समयमा नै म्याग्दीको सामाजिक, आर्थिक र धेरथोर राजनैतिक भूमिकामा महत्वपूर्ण ब्यक्तित्वका रुपमा स्थापित भयो र अर्को त्यो ब्यक्ति जो अत्यन्तै ‘इमोशनल’ छ ! उसलाई अरुका साना दुःखले पनि छुन्छ । त्यो ब्यक्ति जो जस्तै परिस्थीतिहरुमा पनि कहिल्यै डगमगाएन । किन्तु, स–साना दुःखहरुमा पनि आँशु लुकाईराख्न सक्दैन । त्यो ब्यक्ति जो आफूबाहेक अरुलाई पनि आफू नै सम्झन्छ । अरुहरुको दुःख, कष्ट र वेदनाहरुलाई आफ्ना पीडाहरु झैं बोध गर्दछ । अनि सक्दो प्रयास गर्दछ ती पीडालाई कम गर्न !
करिब दुई दशक पहिले ऊ सदरमुकाम झर्‍यो । प्रवेशिका परीक्षाको तयारीका लागि बेनी झर्ने दुई दर्जनभन्दा बढि माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू बिच “बेस्ट साइन्स टिचर” का रुपमा उसले ख्याति कमायो । उनीसँग ‘ट्युशन’ पढेका उनका केही पूर्व विद्यार्थीहरुले मसँगको भेटमा उनलाई अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक सम्झने गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार तत्कालिन समयमा विद्यार्थीहरुलाई विज्ञानका कठिनतम् सिद्धान्तहरुका बारेमा उनले जस्तो मिहीन र गहन तरिकाले कसैले पनि कहिल्यै बुझाएनन् ! यसरी ट्युशन पढाउन बेनी झरेको एउटा युवक विस्तारै विस्तारै सफलताको सिढीं चढ्दै देशकै प्रतिष्ठीत पब्लिकेशन्सको बर्ष ब्यक्ति छनौटको मनोनयनमा पर्नु निश्चयः पनि सामान्य विषय हुन सक्दैन । होईन पनि !
धौलागिरि अञ्चलमा नै ख्यातिप्राप्त माउण्ट एभरेष्ट आवासिय उच्च मा.वि. मा शिक्षकका रुपमा जागिर शुरु गर्न थालेपछि मैले उनलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ । अत्यन्तै मेहनतका साथ उनले स्थापना गरेको विद्यालयले प्रगतिपथ समातेपछि उनी बिस्तारै विद्यालयमा अभिभावकको भूमिकामा मात्र सिमित थिए त्यो बेला जतिखेर म त्यहाँ शिक्षक थिएँ । विद्यालयमा विपन्न र द्धन्द प्रभावित ससाना नानी बाबुहरूले निशुल्क पढ्ने अवसर पाएका थिएँ । ती मध्ये कतिलाई त निशुल्क आवासीय सुविधा पनि प्राप्त थियो । म अचम्म पर्थे सोचेर कि चन्द्र के.सी. ले बोर्डिङ स्कुल खोल्या चाँहि किन रहिछन् – पैसा कमाउन की निशुल्क पढाउन ? यहि विषयमा बेलाबेलामा उनका भाई एवं विद्यालयका प्रिन्सीपल राजुजी सँग मेरो लामै बहस हुन्थ्यो । उनी भन्थे – “दाई (चन्द्र) धेरै नै भावुक मान्छे हो, फिल्ममा मान्छे मरेको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्न ! सानो सानो कुराले छुन्छ । कसैले आएर केही आग्रह गर्‍यो भने नाई भन्न सक्नुहुन्न !” त्यस्तै कहिलेकाही उनले विद्यालयमा पहिलेको जस्तो ध्यान नदिएका विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने गथ्र्यौ । हुन त उनको अनुपस्थितीमा पनि विद्यालयले राम्रो गति लिएको थियो, लिईरहेकै छ तर हाम्रो मान्यता सधैं के रह्यो भने समग्र शिक्षा प्रणाली बुझेका र यो क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्ने उनी जस्ता ब्यक्तित्वको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हो भने सबैका लागि लाभको विषय हुन सक्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाई थियो । तर, उनी आफ्नो ब्यस्त समयका बावजुद अत्यन्तै सिमित समय मात्र निकाल्न सक्थे । मैले कुनैबेला उनलाई यो विषयमा सोधेको पनि थिएँ, उनले मुस्कुराएर भनेका थिए – अब सत्ता हस्तातरण गरेको सर ! अब म अरु क्षेत्रमा सक्रिय हुँदैछु । मैले महशुस गरेँ कि उनी वास्तवमै महत्वकांक्षी ब्यक्ति हुन । र, बहुआयामिक पनि !
मानिसहरु बहुआयामिक ब्यक्तित्वलाई गलत तरिकाले मात्र बुझ्दछन् । मेरो स्वंयको प्रयत्न आफूमा बहुआयामिक ब्यक्तित्वको विकास गर्ने नै हुन्छ, तर मानिसहरु यसलाई उस्तो रुचाउँदैन् र मलाई आक्षेप लगाउँदछन् – तिमी दहिच्यूरे, तिमी अवसरवादी ! म चुपो लाग्दिनँ, प्रतिकारमा उत्री हाल्छु । हो, ठ्याक्कै यहि आक्षेप उनी माथि पनि लगाईन्छ । भनिन्छ – जोसँग पनि ठिक्क पर्छ चन्द्र के.सी ! तर उनी त्यसको प्रतिकार गर्न रुचाउँदैनन् । उनी आफ्नै शैलीमा बग्न व्यस्त छन् । काग कराउँदै जान्छ पीना सुक्दै जान्छ भने झैं !
एक ब्यक्तिका रुपमा उनीमा केहि मानवीय कमजोरीहरु छन । ती कहिलेकाही प्रष्टै देखिन्छन् पनि । र, एउटा सामाजिक उचाई हासिल गरेको ब्यक्तित्व भएका नाताले कहिलेकाही ब्यक्तिगत कुराहरुमा आत्मकेन्द्रित भएर उनले गर्ने विश्लेषणहरु पटक्कै मन पर्दैन मलाई । त्यसैकारण, कुनै समय उनलाई अत्यन्तै अरुचीपूर्वक हेर्ने गर्थे म । अहिले पनि मेरो मान्यता के हो भने कि उनको ब्यक्तिको सबभन्दा दुर्वल पक्ष यहि हो । यहि एउटा कमजोरीलाई सुधार्न सक्ने हो भने चन्द्र के.सी. को ब्यक्तित्वको खास रौनक र सुवास सर्वव्यापी हुने थियो !
तर उनले थुप्रै स्मरणयोग्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जस्तो जिल्लामा पहिलो पटक सहकारीको अवधारणमा सहकारी सञ्चालनमा उनको संलग्नता प्रशंसनीय कार्य हो । जुन अहिले जिल्लाकै सबभन्दा सफल सहकारी संस्था बन्न गएको छ । एकताका रक्सी उत्पादन कम्पनीमा उनी र उनीसहितका केही शिक्षाविदहरुको शेयर लगानीका विषयमा पनि मैले टिप्पणी गरेको थिएँ । पछि सुनेँ त्यो कम्पनी बेचियो रे, तर जेहोस् ब्यक्तिगत रुपमा त्यसमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता मलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन । एउटा शिक्षाविद र सामाजिक अभियन्ताका लागि त्यो भन्दा लगानीका लागि अन्य थुप्रै सम्भावित क्षेत्रहरु पनि थिए भन्ने उनले बिर्सनु हुँदैनथ्यो । खैर, यो उनको ब्यक्गित र ब्यवसायिक संलग्नताको कुरो रह्यो यसमा खास टिप्पणी नगरुँ, किन्तु त्यसै समय ताका अञ्चलमै पहिलो पटक एफ एम रेडियो स्थापनामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता र लगानीका लागि कुन शब्दले प्रशंसा गरुँ ? जुन रेडियो हाम्रो भेगको सबभन्दा बढि सुनिने रेडियो बनेको छ !
पछिल्लो समय लायन्स क्लबबाट जिल्लामा सामाजिक क्षेत्रमा उनले खेलेको भूमिका अत्यन्तै सर्‍हानिय कार्यका रुपमा लिनुपर्छ । जसले गर्दा जिल्लाका एक पाँच सयभन्दा बढि आँखाका रोगीहरुको निशुल्क शल्यक्रिया सम्भव भएको छ ! त्यस्तै एक अत्यन्त दुर्लभ र महंगो उपचारखर्च लाग्ने रोग हाइपो प्लाष्टिक एनिमिया रोगबाट ग्रसित विपन्न परिवारकी युवतीको सफल उपचारका लागि आर्थिक सहयोग संकलन समितिका संयोजक भई करिव पचास लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न उनले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका अविष्मरणीय र स्तुतीय रहने नै छ ।
एक शुभचिन्तक नाताले उनमा रहेका केहि दुर्बल मानवीय स्वभावहरुलाई स्वभाविक मान्दै म शुभेच्छा ब्यक्त गर्न चाहन्छु कि कान्तिपूर वर्ष ब्यक्तिमा उनले जिते पनि नजिते पनि सामाजिक सत्कार्यमा उनको भूमिका सधैं विजयी र निर्णायक रहोस् । सतत् शुभकामना तिमीलाई प्रिय अभियन्ता !